Manchester United ayaa ku qasbanaatay inay bixiso lacag dhan £4.5 milyan oo Gini oo ku waajibtay markii uu Bruno Fernandes goolka guusha ka dhaliyey Brighton maalintii Sabtida, taas oo ciyaarta oo dhamaatay rikoodhe loo dhigay Red Devils.
United ayaa guusheedii ugu horreysay ee xili ciyaareedkan ka gaadhay Brighton oo ay kaga adkaatay 3-1, laakiin waxay libintani usoo jiidday dayn lacageed oo dhan £4.5 milyan oo Gini oo ay u shubayso kooxda reer Portugal ee Sporting Libson.
Sida uu dhigayay heshiiskii Manchester United ay kula soo saxeexatay Fernandes bishii January, waxay United bixinaysay £4.5 milyan oo Gini marka ay gaadhaan 25 ciyaarood oo guulo ah horyaalka Premier League, iyadoo lacagta ay Red Devils kula soo wareegtay laacibkan oo ahayd £45 milyan oo Gini ay gaadhi doonto £66.7 milyan oo Gini.
Bishii July ayay Manchester United bixisay £2.74 milyan markii ay usoo baxday tartanka Champions League ee xili ciyaareedka dambe, waxaana sidaas dhigayay qandaraaska ay laacibkan kula soo saxeexdeen.
Bruno Fernandes ayaa ahaa ciyaartoyga ugu wanaagsan Manchester United tan iyo bishii January markii uu yimid, waxaanu illaa hadda u dhaliyey 13 gool, waxaase uu isbeddel ku sameeyey hab-ciyaareedkii kooxda.
Laacibkan ayaa canaan u jeediyey ciyaartoyda kooxdiisa kaddib kulankii Brighton, waxaanu yidhi: “Brighton si fiican ayay u ciyaartay, waxaananu u baahnayn inaanu kubadda soo ceshano, inaanu cadaadino. Waxa aanu u baahnayn in aanaan lumin kubadda. Iyagu (Brighton) fursado badan ayay heleen, waana run.”
“Mid Dadka Ayuu Qaniinaa, Midna Wuu Dagaalamaa” – Diego